တရုတ် VPSA အောက်ဆီဂျင်မီးစက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | Boxiang
အခန်းအပူချိန်နှင့်လေထုဖိအားအခြေအနေအောက်တွင် Psa အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာများသည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအောက်ဆီဂျင် (၉၃ ± ၂%) ရရှိရန်လေထု၌နိုက်ထရိုဂျင်၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ရေနှင့်အခြားအညစ်အကြေးများကိုရွေးချယ်စုပ်ယူရန်အထူး VPSA မော်လီကျူးဆန်ခါကိုသုံးပါ။ ) ့။
ရိုးရာအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနှင့်အတူအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့် cryogenic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းလမ်းကိုသုံးသည်။ သို့သော်ကိရိယာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်မားပြီးစက်ပစ္စည်းများသည်ဖိအားမြင့်ပြီးအလွန်နည်းသောအပူချိန်အောက်တွင်လည်ပတ်သည်။ ခွဲစိတ်မှုသည်ခက်ခဲသည်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းမြင့်မားပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားသည်၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စတင်ပြီးနောက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရန်နာရီများစွာဖြတ်သန်းရလေ့ရှိသည်။
psa အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းထဲသို့ ၀ င်လာကတည်းကနည်းပညာသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏စျေးနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်သည်အထွက်နှုန်းနိမ့်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုလိုအပ်ချက်များသည်မမြင့်မားသောအခြေအနေတွင်အားကောင်းသောယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်၎င်းကိုရောစပ်ရာတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ပေါက်ကွဲမှုမီးဖိုထဲတွင်အောက်ဆီဂျင်ပြည့်ဝမှု၊ ပျော့ဖတ်အရောင်တင်မှု၊ ဖန်မီးဖို၊ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းနှင့်အခြားနယ်ပယ်များ
၁၉၉၀ ခုနှစ်များ မှစ၍ psa အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများ၏အားသာချက်များကိုတရုတ်လူမျိုးများကတဖြည်းဖြည်းအသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ပြီးမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ငန်းစဉ်များထဲသို့ထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။
Hangzhou Boxiang Gas Equipment Co. , Ltd ၏ psa VPSA အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းသည်ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဦး ဆောင်လျက်ရှိပြီး၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအလွန်ထူးခြားသည်။
psa ၏အဓိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းညွှန်ချက်များအနက်တစ်ခုမှာစုပ်ယူမှုပမာဏကိုလျှော့ချရန်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်မော်လီကျူး sieve များတိုးတက်ခြင်းကိုမော်လီကျူး sieve များ၏စုပ်ယူမှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် PSA ၏အခြေခံဖြစ်သောကြောင့်မြင့်မားသောနိုက်ထရိုဂျင်စုပ်ယူနှုန်းကို ဦး တည်သည်။
Psa အခြားအဓိကတိုးတက်ရေး ဦး တည်ချက်သည်တိုတောင်းသောစက်ဝန်းကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်ကိုဆိုးရွားစေသောအရာများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်၊ စုပ်ယူနိုင်သောတာ ၀ န်အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။ စုပ်ယူနိုင်သောမျှော်စင်တွင်ဓာတ်ငွေ့စူးစိုက်မှုဖြန့်ဖြူးမှုအားနည်းခြင်းနှင့်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်အပြောင်းအလဲအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုရှေ့တန်းတင်ပါ။
PSA အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များစွာတွင် PSA, VSA နှင့် VPSA ကိုယေဘူယျအားဖြင့်အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
PSA သည်အလွန်ကြီးမားသောဖိအားစုပ်ယူနိုင်သောလေထုမှစုပ်ယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောယူနစ်များ၏အားသာချက်များနှင့်မော်လီကျူး sieve များအတွက်လိုအပ်ချက်များနည်းပါးခြင်းနှင့်သေးငယ်သောပစ္စည်းများတွင်သုံးသင့်သောမြင့်မားသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏အားနည်းချက်များရှိသည်။
VSA (သို့) လေထုဖိအားစုပ်ယူခြင်းစုပ်စက်စုပ်စက်ဖြစ်စဉ်သည်စွမ်းအင်နိမ့်အားသာချက်နှင့်အတော်လေးရှုပ်ထွေးသောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်မားခြင်း၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။
VPSA သည်လေထုဖိအားမှတဆင့်လေဟာနယ်စွန့်ထုတ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်မော်လီကျူးဆန်ခါများထိရောက်မှုမြင့်မားခြင်းစသည့်အားသာချက်များရှိသည်။ စက်ပစ္စည်းများစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် VSA လုပ်ငန်းစဉ်ထက်များစွာနိမ့်ကျပြီးအားနည်းချက်များမှာမော်လီကျူးဆန်ခါနှင့်အဆို့ရှင်အတွက်အတော်လေးမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။
Hangzhou Boxiang ဓာတ်ငွေ့သည် VPSA လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်ခံသည်၊ ၎င်းသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံး ((အမှတ်တံဆိပ်မော်လီကျူးမော်လီကျူးဆန်ခါကိုသုံးခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်) ကိုသာမကဘဲရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးသေးငယ်စေခြင်း၏ပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်စေသည်။ စက်ပစ္စည်းများ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးစွမ်းဆောင်ရည်/စျေးနှုန်းအချိုးမြင့်သည်။
psa အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုလုံးကို blower, vacuum pump, switching valve, absorber နှင့် oxygen pressure booster unit of oxygen balance tank တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဖုန်မှုန့်များကို suction filter ဖြင့်ဖယ်ရှားပြီးနောက်လေစိမ်းများကို Roots blower ဖြင့် 0.3 ~ 0.4 Barg သို့ဖိအားပေးပြီး adsorbents တစ်ခုထဲသို့ ၀ င်သည်။
adsorbent ကိုရေ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့်အခြားဓာတ်ငွေ့အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်တို့ကစုပ်ယူအားဖြည့်ပေးပြီးအောက်ခံရှိ activated alumina ဖြင့်စုပ်ယူသည်၊ ထို့နောက်အောက်ဆီဂျင်ကို activated alumina နှင့် zeolite တို့ဖြင့်စုပ်ယူသည်။ 13X မော်လီကျူးဆန်ခါ၏ထိပ်တွင်
အောက်ဆီဂျင် (အာဂွန်အပါအ ၀ င်) သည်စုပ်ယူမှုမရှိသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး adsorber ၏ထိပ်ထွက်ပေါက်မှထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်အောက်ဆီဂျင်ချိန်ခွင်လျှာစည်သို့ထုတ်လွှတ်သည်။
adsorbent ကိုအတိုင်းအတာတခုအထိစုပ်ယူသောအခါ adsorbent သည် saturation အခြေအနေကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင်လေစုပ်စက်စုပ်စက်ကိုစုပ်အားစုပ်စက်၏စုပ်ယူမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးလေစုပ်ယူနှုန်းသည် ၀.၄၅ မှ ၀.၅ BARg ဖြစ်သည်။
စုပ်ယူထားသောရေ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အခြားဓာတ်ငွေ့အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကိုလေထုထဲသို့စုပ်ထုတ်လိုက်ပြီးစုပ်ယူမှုကိုပြန်လည်ပြုလုပ်သည်။
အထက်ပါအခြေခံအဆင့်သုံးဆင့်ကို PLC နှင့် switching valve system တို့မှအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သည်။
အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်ရန် psa လေသန့်စင်ခြင်း၏အခြေခံသဘောတရား ၁
လေထု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာနိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်ဆီဂျင်အတွက်ကွဲပြားသောစုပ်ယူနိုင်သောရွေးချယ်နိုင်သော adsorbents များကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးသင့်တော်သောနည်းပညာဖြစ်စဉ်သည်အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်ဆီဂျင်ကိုခွဲခြားရန်ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်နှစ်မျိုးစလုံးတွင် quadrupole အခိုက်အတန့်ရှိသော်လည်းနိုက်ထရိုဂျင်၏ quadrupole အခိုက်အတန့် (၀.၃၁ A) သည်အောက်စီဂျင် (၀.၁၀ A) ထက်များစွာပိုကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်နိုက်ထရိုဂျင်သည်အောက်ဆီဂျင်ထက် zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါထက်ပိုအားကောင်းသောစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ zeolite မှ)
ထို့ကြောင့်လေသည်ဖိအားအောက်တွင် zeolite adsorbent ပါ ၀ င်သော adsorption အိပ်ရာကိုဖြတ်သန်းသောအခါနိုက်ထရိုဂျင်သည် zeolite မှစုပ်ယူသွားပြီးအောက်ဆီဂျင်စုပ်ယူမှုအားနည်းသောကြောင့်၎င်းသည်ဓာတ်ငွေ့အဆင့်တွင်ပြည့်ဝပြီးစုပ်ယူမှုကုတင်မှစီးဆင်းသည်၊ အောက်စီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ကိုသီးခြားဖြစ်စေသည်။ အောက်ဆီဂျင်ရယူပါ။
စုပ်ယူနိုင်သောကုတင်နှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုသောပြောင်းများဖြင့်အောက်စီဂျင်ကိုအဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် psa အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာသည်အောက်ဆီဂျင် ၈၀% ~ ၉၃% သာရရှိနိုင်ပြီး၊ အောက်ဆီဂျင်ကြွယ်ဝသောဟုခေါ်သည့် cryogenic လေထုခွဲစက်၌အောက်ဆီဂျင် ၉၉.၅% နှင့်ထို့ထက်ပိုသောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။
ကွဲပြားသောစွန့်ပစ်နည်းလမ်းများအရ psa အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုခွဲခြားနိုင်သည်
1. PSA လုပ်ငန်းစဉ်: ဖိအားစုပ်ယူမှု (0.2-0.6mpa)၊ လေထုမှစုပ်ယူမှု။
PSA လုပ်ငန်းစဉ်ပစ္စည်းများသည်ရိုးရှင်း။ သေးငယ်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အောက်ဆီဂျင်အထွက်နည်းခြင်း၊ စွမ်းအင်မြင့်သုံးစွဲမှု၊ အသေးစားအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှု (ယေဘူယျအားဖြင့် <200m3/h) အခါသမယများအတွက်သင့်တော်သည်။
2. VPSA လုပ်ငန်းစဉ်: ပုံမှန်ဖိအားအောက်တွင်စုပ်ယူမှု (သို့) ပုံမှန်ဖိအား (0 ~ 50KPa) ထက်အနည်းငယ်ပိုမြင့်ခြင်း၊ လေဟာနယ်ထုတ်ယူခြင်း (-50 ~ -80kpa) စုပ်ယူခြင်း
PSA လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက VPSA လုပ်ငန်းစဉ်သုံးပစ္စည်းများသည်ရှုပ်ထွေးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်မားသော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီးကြီးမားသောအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအခါသမယများအတွက်သင့်တော်သည်။
သာမန် adsorbents များပေါ်တွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့်ရေစုပ်ယူနိုင်စွမ်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်ဆီဂျင်ထက်များစွာသာလွန်သည်။ စုပ်ယူနိုင်သောစုပ်ယူသောအိပ်ယာတွင်သင့်တော်သောစုပ်ယူနိုင်သောစုပ်စက်များ (သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုစုပ်ယူနိုင်သောအောက်ဆီဂျင်ကိုသုံးခြင်း) ဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်။
advanced အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ ရင့်ကျက်သောနည်းပညာ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်တာဝါနှစ်ခု psa အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ
ကောင်းမွန်သောစနစ်လုံခြုံရေး၊ ကိရိယာများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အမှားကာကွယ်ခြင်းအစီအမံများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်၊
ယခင်: စက်မှုသုံး VPSA အောက်ဆီဂျင်မီးစက်
နောက်တစ်ခု: အရည်နိုက်ထရိုဂျင် Generator ကို